Moments leh saaxiibo 58
Waxa na ku boorinaya inaan dhaqan gelino fikradaheena. Ilaa intee ayaa la noo oggol yahay inaan ka soo horjeesanno ra'yigeenna kuwa kuwa kale?
Fekerku waa natiijada ka timid fikirka. Fikraddu waa aragti udhaxeysa aaminaada kaliya iyo aqoonta ku saabsan maadooyinka ama waxyaabaha. Midkii fikir ka qaba shay, waa lagu gartaa dadka aqoonta u leh ama aaminsan aaminaad ku saabsan mowduuca. Mid wuxuu leeyahay fikrad maxaa yeelay wuxuu ka fikiray mawduuca. Fikradiisa ayaa laga yaabaa inay sax tahay ama khaldan tahay. Haddii ay sax tahay iyo inkale waxay ku xirnaan doontaa dhismahiisa iyo habka caqli galkiisa, Haddii caqligiisa uu yahay mid aan laga faquuqin, fikradihiisu caadi ahaan way saxnaan doonaan, iyo, in kastoo uu ka bilaawdo dhismo qaldan, wuxuu cadeyn doonaa inay khalad ku jiraan sababahooda. Haddii, si kastaba ha ahaatee, uu u oggolaado nacaybka inuu faragalin ku sameeyo sababtiisa, ama saldhiggiisa ku saleeyo nacaybka, fekerka uu sameeyo badanaa wuu khaldan yahay.
Fikradaha ninku sameeyay waxay matalaan isaga runta. Waxaa laga yaabaa inuu khaldan yahay, laakiin wuxuu aaminsan yahay inay sax yihiin. Aqoon la’aan, ninku wuxuu istaagi doonaa ama ku dhici doonaa fikirradiisa. Markii fikradihiisu la xidhiidhaan diinta ama wax uun hagaagsan, wuxuu aaminsan yahay inuu u istaago iyaga isla markaana dareemo inuu yahay qof ku dhiirrigelinaya inuu dadka kale qaato fikradiisa. Meeshaas ayuu ka yimaadaa soohdintiisa.
Taas oo nagu boorinaysa inaan dhaqan gelino fikradaheena waa iimaanka ama aqoonta fikradaheenna ay ku xiran tahay. Waxaa sidoo kale laga yaabaa in nalagu dhiirrigeliyo rabitaanka dadka kale ay ka faa'iideystaan ​​waxa aan u aragno inay wanaagsan yihiin. Haddii aqoonta qofka salka ku haysa iyo rabitaanka wanaag sameynta lagu daro tixgelin shaqsiyeed, dadaalada loogu badalayo kuwa kale fikradahaaga ayaa laga yaabaa inay ku soo baxaan xag-jirnimo, iyo, halkii wanaagga, waxyeelada ayaa la sameyn doonaa. Sababta iyo niyad wanaaggu waa inay ahaadaan tilmaameheena ku saabsan soo celinta fikradaheena. Sababta iyo wanaagsanaanta ayaa noo oggolaaneysa inaan soo bandhigno fikradahaaga dood, laakiin naga reebno inaan isku dayno inaan ku qasbinno kuwa kale inay aqbalaan. Sababta iyo wanaagga ayaa naga mamnuucaya inaan ku adkaysano in dadka kale ay aqbalaan oo loo beddelo fikradaheenna, waxayna naga dhigayaan kuwo xoogan oo daacad ah taageerada aan u maleyno inaan ogaanno.